Izakhiwo ezisetyenziswayo ze elecampane, ukusetyenziswa kwayo kunye nokuchasene.
Izinto zokuphilisa ze-elecampane
Iimpawu ze-elecampane kunye neempawu zonyango
I-Devyasil inezixhobo ezininzi ezinobuncedo ezijongene kakuhle nezifo ezahlukeneyo. Isityalo ngokwayo sisoloko singapheliyo, nangona ngamanye amaxesha kukho iintlobo zonyaka. I-Devyasil ikhula ngendlela yehlathi, ukuphakama kwayo kungafikelela kwiimitha ezimbini. Amagqabha avulekile, ephawulwe ngephi. Isitshizi sinene kakhulu, ngokuqhelekileyo silungile. Isityalo siqhakaza ngeentyantyambo ezinkulu eziphuzi. Indawo ekuthandayo yokukhula i-glades evulekileyo, iifudu, kufuphi neendawo zokugcina amanzi. Ngamayeza omntu, amaqabunga kunye neengcambu ze-élécampane ezivuthiweyo zisetyenziswa rhoqo.
Iipropati zee-elecampane kunye neengqinisiso zokusetyenziswa
Njengoko sele kuthethwe ngazo, inxalenye engundoqo yamacandelo asebenzisekayo agxininiswe kumaqabunga kunye nengcambu yesityalo. Ezi ziquka i-tannins, i-resins, i-oil ebalulekileyo, i-tocopherol, i-antioxidants, i-polysaccharides inulin. Ukulungelelaniswa kwingcambu yeshumi elinanye okanye umxholongwane unceda ngokupheleleyo ekunyangeni izifo ezivuthayo zesisu, i-pancreas kunye nomathumbu wonke. Ukufumana umhluzi kukunceda ukulahla i-sputum ngexesha le-pneumonia okanye i-bronchitis. Ezinye izinto zityalo ziyingozi kwiimbungu kunye nezinye izilwanyana ezinobungozi. Ukusetyenziswa kwe-elecampane kuneempembelelo zomsindo kunye nokuchasa.
Ifumaneka ekwakheni i-vitamin E (ebizwa ngokuba yi-tocopherol) ngenxa yokunciphisa i-radicals yamahhala kunye nokususwa kweetekisi, ngokukhawuleza kunciphisa inkqubo yokuguga kumgangatho weselula. Ukongezelela, ngenxa yeepropati zayo zokulwa ne-antioxidant, le nto inciphisa kakhulu umngcipheko we-neoplasms ezimbi.
Umhluzi weDevyasilny ubaluleke kakhulu kwizifo zesikhumba ezifana ne-lichen, eczema, i-scabi kunye nokubetha. Ukulimala kwenyawo, ukuhlamba kunye nokufakelwa kwamaqabunga owomileyo kwizityalo kunceda. Ngesiseko se-elecampane kunokwenzeka ukuba ulungise ukulungiswa kwe-cosctic cosmetic, eya kuphucula ngokucacileyo ulusu kunye nokukhusela ukungcola kwee-pores.
Phakathi kokuchasene nokusetyenziswa kwe-elecampane kuquka intliziyo kunye nesifo se-vascular, ukungaphumeleli kwezintso. Akwacetyiswa kwakhona kwabasetyhini abakhulelweyo, abafazi abaqhawulayo kunye nabantu abanegazi elibizayo.
Ngenxa yezifo zemiphunga, amathumbu, isisu kunye ne-pancreas, i-decoction evela kwi-rhizome ifanelekile. Ukwenza oku, enye ithispoon yamanzi kufuneka ifakwe enye ithisipuni yengcambu eqoshiwe, uze ubeke umlilo obuthathaka uze ubilise. Ukulungele ukusetshenziswa emva kweeyure ezingama-4 zokungena. Phuza kanye ngosuku ngosuku lwesisu esingenalutho.
Ukunyanga kwezifo zesikhumba kudinga ukusetyenziswa kwendawo yomhluzi. Kule nto, iifompo eziyi-2-3 zengcambu yomhlaba zongezwa kwiglasi yamanzi. Pheka uze ubilise. Ingasetyenziselwa emva kokuba udidi luye lwacoca kwiqondo lokushisa. Le recipe ifaneleke ngokufanelekileyo kwaye njengento yokuphucula.
Ngeenjongo zokukhusela, i-cocktail yamaqabunga amnandi e-elecampane kunye nejusi yeziqhamo iya kuba luncedo. Ukuba unayo i-blender, unokubetha izithelo ezithandekayo 1-2 (ibhanana, i-peach, i-apricot) kunye namacembe ambalwa esityalo.
Njengoko sele uqondayo, i-elecampane inemveliso eninzi ebonakalayo enokusetyenziswa kuphela kwiiyeza zomntu, kodwa nakwi-cosmetology yasekhaya. Sebenzisa lesi sipho sendalo esiza kukunceda ukujonga nokuziva ngcono!
Iimbangela kunye neentlobo ze-cardiac arrhythmia
Iziyobisi ngenxa yokulahleka kwesisindo - ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo?
I-Aromatherapy okanye unyango ngeoli ecocekileyo
Ukuphilisa i-rice mushroom
Izindlela zokukhusela ngokukhawuleza: zeziphi izithintelo zokukhusela emva kokulala ngesondo
Iimfesane ezinomtsalane: iingcamango zeNew Year's costume kubantwana
Ukwenza impilo enempilo kubantwana
Iibhisikidi kunye ne-raspberry jam
Awuzange ubone umntu ekhala
Kwaye thina ekhaya senza i-milkshake enomnandi
Bézé "Imithi yeKrisimesi"
Isobho se-Beetroot kunye nenkukhu idiza
Iimpawu eziphathekayo zengubo eziphathekayo
Isaladi yePasta nge mozzarella
UPolina Gagarina uye waphendula ngokukhawuleza kwiimbuzo malunga nokukhulelwa kwakhe
Izakhiwo eziwusizo kunye nokusetyenziswa komlambo